War saxaafadeed – DKMG oo Beesha Caalamka ugu Baaqday in ay Fuliyaan Balanqaad yadii Kharashka – Radio Daljir
War saxaafadeed – DKMG oo Beesha Caalamka ugu Baaqday in ay Fuliyaan Balanqaad yadii Kharashka
Muqdisho, May 14 – Waxaa la filayaa in mudo sadex bilood ah ay ku soo dhamaato waqtigii loo qabtay in lagu soo af-jaro marxalada ku-meel-gaarka. Iyadoo aysan jirin taageero la taaban karo oo ka timid beesha caalamka, dowladdu waxay ku tilaabsatay dhameystirka howlaha heshiiskii Roadmap-ka, oo ay ka mid tahay diyaarinta dastuurka si loo ansixiyo, wax ka qabashadda xaalada amniga iyo guulo badan oo laga soo hoyay dowlad-wanaaga.
Caqabado badan kadib, dowladdu waxay muujisay hogaan iyo karti ay kaga go?an tahay in natiijo laga gaaro howlaha socda wakhtigan muhiimka ah, iyadoo ay oday-dhaqameedyada dadaal ugu jiraan sidii looga arinsan lahaa aayaha ummada Soomaaliyeed. Dadaalka dowladu waxaa ka dhashay natiijooyin oo shacabka Soomaaliyeed galiyay kalsooni ku aadan wax-qabadka dowladooda. Taasi waxay abuurtay dareenkii shacabka oo wax iska badalay, maadaama ay dowladdu heshay kalsooni, balse waxaa meesha ka maqan kaalintii ku aadaneyd beesha caalamka.
Bishii September ee sanadkii hore, Beesha Caalamka waxay yaboohday kharashkii lagu meel marin lahaa geedi-socodka Roadmap-ka, balse wali kharashkaas ma soo gaarin DKMG. Taageerada beesha caalamka waxay aasaas u aheyd horumarintii iyo waxqabadkii DKMG ee sanadihii lasoo dhaafay taas oo shacabka Soomaaliyeed abaal weyn uga hayaan. Waxaa suura gal ah in dibu-dhigida kharashka loo balan qaaday DKMG ay keeni karto hakad ku yimaada waxqabadkii iyo horumarkii la gaaray.
Dowladdu waxay u diyaar garowday dhameystirka howlaha geedi-socodka Roadmap-ka, iyagoo ay jirto caqabado salka ku haya miisaaniyadda, sababtoo ah inaan la dhameystirin heshiiskii ayaa ah khasaaro. Dhanka siyaasada, dowladdu waxay abuurtay jawi cusub oo ay shacabku ku qanacsan yihiin kaas oo nabad ku dhameynaya xiliga kala-guurka. Oday-dhaqameedyada waxaa ka go?an horumuud in ay ka noqdaan dadaalka nabadda iyo dhameystirka howlaha geedi-socodka iyo wakhtiga ka danbeeya.
Wafuuda waxaa la siiyay fursado ay wax kaga qabtaan dhibaatooyinka qabaa?ilka kala tirsanayaan iyadoo si gooni gooni ah looga fariistay arimahaas maalmihii lasoo dhaafay. Dowladda waxay u aragtaa howlaha muhiimka ah ee qabsoomay kuwa aad u dhiiragalinaya oo taageeri doono xeer-dhaqameedka iyo sidii xal loogu heli lahaa maareynta khilaafka.
Waxaa cad in dalka uu ku socdo wadada horumarka, balse waxaa haboon in dadaalka dowladda uu daba socdo taageero dhaqaale si loo xaqiijiyo dhameystirka howlaha harsan ee geedissocodka qorshaha Roadmap-ka. Beesha caalamka waxay fahamsan yihiin marxalada uu ku sugan yahay, gaar ahaan waqtiga kala guurka ee foodda nagu haya, kaas oo aan lagu maareyn karin yabooh aan wali la bixin.